Birthday ကိတ်ပုံစံ ဆူရှီအကိတ်ကြီးတွေမှာပြီး ရိုလို့ရပြီနော် ? – FoodiesNavi
Sushi အသည်းစွဲကြိုက်တဲ့ချစ်သူခင်သူတွေကို Sushi ကိတ်လေး လက်ဆောင်ပေးပြီး ထင်မှတ်မထားတဲ့အံ့သြဝမ်းသာခြင်းတွေဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ်ဆို ? ဘယ်လောက်တောင်ကြည်နူးဝမ်းသာဖွယ်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ Sushi ကိတ်ဆိုလို့ Sushi ပုံစံကိတ်သားတွေကို ပြေးမမြင်လိုက်နဲ့ဦးကိုယ့်လူ ? Sushi လေးတွေနဲ့ပုံဖော်ဖန်းတီးထားတဲ့ Birthday Cake ဒီဇိုင်းလေးပါနော်။ ရလိုက်တဲ့လူကတော့ သေအောင်ဗိုက်ကားသွားမှာ အသေအချာပဲ ? ဒီလို Sushi လေးတွေရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ မြောက်ဒဂုံထဲက ဂျပန်အရသာစစ်စစ် sushi တွေရနိုင်မယ့် ” Tanoshii Sushi ” ဆိုင်လေးပါ။
Japan မှာ အချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား Chef ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ Sushi လက်ရာတွေမို့ အရသာကတော့အံ့မခန်းပါပဲ။ အတိုင်းအဆကောင်းတဲ့အရသာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကရှယ်မိုက်နေတော့ Tanoshii ကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေတော့တာပဲ ? ထည့်သုံးပေးထားတဲ့ items တွေကလည်းလတ်ဆတ်နေတော့ Sushi အရသာကိုနှစ်ဆလောက်မြောက်တတ်သွားစေတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်းပိုးစိုးပက်စက်ကြီးတန်တယ်။ ၁၂၀၀ပွဲလေးတွေဆို ဗိုက်ပေါက်ထွက်အောင်စားမှ ၆၀၀၀လောက်ပဲကျတယ်။ (၄၅၀၀)တန် အစုံ set လေးတွေဆိုလည်း (၁) set တည်းနဲ့ကို ပြည့်တင်းနေရောပဲ။ Cake ပုံစံ sushi တွေကတော့ Tower လို(၂၀)ထပ်(၃)ထပ်တွေလိုမျိုးရနိုင်သေးတယ်။ (၂)သောင်းဝန်းကျင်လောက်ဆို ရှယ်အကိတ်ကြီးတွေရပြီ။
ဆိုင်ကအိမ်ဆိုင်လေးဆိုတော့ သွားစားလို့တော့မရဘူးရယ် ။ Take away သွားဝယ်လို့ရသလို Online ကနေတစ်ရက်ကြိုမှာလို့ရတယ်နော်။ အနည်းဆုံး(၅၀၀၀)ဖိုးကစပြီးမှာလို့ရတယ်။ Tanoshii Sushi ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၃၄) ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း ၊ (၃၅)ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 0973147938, 09795607051ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/tanoshii